အိုးဝေ: အိပ်စက်ခြင်းနှင့် အသက်ရှုရပ်ခြင်းပြဿနာ (Obstructive Sleep Apnoea)
Posted by ဖိုးသောကြာ at 6:05 AM
ဇနိ August 18, 2008 at 3:53 PM
ဗဟုသုတတွေ ဝေမျှလို့ ကျေးဇူးပါ မေစနိုး။
တားမြစ် ထားသော... August 19, 2008 at 11:46 AM
ဆက်လက်ဝေမျှပါအုံး။ မေစနိုး (ခေါ်) ဖိုးသောကြာရေ။
pandora August 19, 2008 at 5:08 PM
သိချင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို စောင့်ဖတ်နေပါမယ်။
tmn August 19, 2008 at 7:23 PM
မင်းညို August 20, 2008 at 12:38 PM
စိုးထက် - Soe Htet ! August 20, 2008 at 7:05 PM
အကုန်ပြီးရင် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဘလော့ မှာ တင်ချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ... လာရောက် ရေးသားမည် ဆိုလျှင် ဖိတ်လိုက်ပါမည် ခင်ဗျာ :)
ဖိုးသောကြာ August 20, 2008 at 7:22 PM
အားပေးကြသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကုသနည်းတွက်လည်း သူဆက်ရေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။
ကိုစိုးထက်ရေ.. ကျန်းမာရေး ဘလော့ဂ်မှာ တင်ချင်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ တင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ မေစနိုးကိုစား ပြောလိုက်တာပါ။
ဖိတ်ဖို့ကတော့ စောသေးတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခု ရေးဖြစ်အောင် တော်တော် အချိန်ကြာကြာ တိုက်တွန်းထားရလို့ပါ။ သူတကယ် အချိန်ပေး ပြီးကျန်မာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ရေးနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီမှာလာတင်ချင်စိတ်ရှိလာမှာပါ။ (ဖိုးသောကြာ)
စိုးထက် - Soe Htet ! September 8, 2008 at 5:03 PM
ကျေးဇူး ကိုဖိုးသောကြာ ... မေစနိုး ရဲ့ မေးလ် လေး သိရရင် ဖိတ်ထား လိုက် ချင်ပါတယ် ... အဆင်ပြေ တဲ့ အချိန် မှ ဝင်ရေး ပေးပါ ခင်ဗျာ ... :)